Soft skills for 2020
Khai Deih NeamDigital Markeitng Executive၂၀၂၀ မှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာမယ့် skill တွေက ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ကျွမ်းကျင်ပေါက်ရောက်ပြီး ထက်မြက်နေဖို့အတွက် hard skill တွေလိုအပ်သလို soft skill ကလည်း အရေးပါတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၀ ကို စတင်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂၀၂၀ အတွက် လိုအပ်လာမယ့် skill တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။၁။ Data LiteracyData ဆိုတာ ၂၁ ရာစုမှာ စီးပွားရေးတစ်ခုကို အားဖြည့်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။Data ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ သူ့တို့ ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့အခါမှာ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။Data တွေရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့ company တွေက ...
How to sustain your energy throughout your workday
Khant Zaw Hein Digital Marketing InternIn the workplace, high energy relates to high performance, better productivity ...
Shining In Your Interview: Ask Smart Questions At ...
Conor SmithManaging Director,New Day JobInterview ဖြေတဲ့အခါ တောက်ပနေဖို့ - မှန်ကန်သော မေးခွန်းများကို မေးခြင်းသင် အလုပ်အတွက် interview ဖြေတိုင်း အဆုံးသတ်မှာ interviewer က ဘာမေးစရာရှိလဲလို့ မေးတဲ့အခါမှာ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ပြီး ဘာမေးရမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေ ကြုံဖူးပါသလား?အဲ့လို အခါတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဟာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပေမယ့် အရေးမကြီးတဲ့ အရာတွေကို မေးတတ်ကြပါတယ်။အများစုမေးတတ်ကြတဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့- လစာက ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ?- အခြားအကျိုးခံစားခွင့်တွေက ဘာလဲ?- ရုံးတက်ချိန်တွေက ဘယ်အချိန်လဲ?- ပိတ်ရက်တွေကော အလုပ်လုပ်ရမှာလား?- ရုံးက ကားပါကင်ကော ရလား?စတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မေးခွန်းတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမယ့် သင်နဲ့ အတူတူအလုပ်လုပ်ရမယ့် Senior တစ်ယောက်က interview နေတယ်ဆို အဲ့လို မေးခွန်းမျိုးကို မမေးသင့်ပါဘူး။အဲ့လို မေးခွန်းတွေကသင်က အလုပ်လုပ်ရတာထက် အခြားအရာတွေကို ပိုအလေးထားတယ်။သင်က ...
Career Advice LandYourDreamJob
Khant Zaw Hein Former Digital Marketing Intern"Your personal brand is what people say about you ...
Khai Deih Neam Digital Marketing Executiveအင်တာဗျူးသွားဖြေတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လိုအရာတွေကေိုဖြေသင့်တယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာကို တော်တော်များများသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ အင်တာဗျူးသွားဖြေတဲ့အခါ ကိုယ် သတိမထားလိုက်မိတဲ့ အချက်လေးတွေ၊ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အခြေခံအချက်လေးတွေကြောင့် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုး ဆုံးရှုံးမှုတွေ မဖြစ်ဖို့ အောက်ပါ အချက်လေးတွေကို လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။၁။ သင်အင်တာဗျူးဖြေဆိုရမည့်ကုမ္မဏီနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာထားပါအလုပ်ရှင်တွေက သူတို့ကုမ္မဏီအပေါ်မှာ interview ဖြေတဲ့သူက ဘယ်လောက် စိတ်ပါဂင်စားမှုဘရှိသလဲဆိုတာကို သိချင်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကို မေးမြန်းတတ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ သင့်ဘက်က ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတောင် မဖြေနိုင်ရင် သင့်ကို အထင်သေးကြမှာဖြစ်ပြီး တခြားinterview ဖြေတဲ့သူတွေထဲက Company အကြောင်း သိတဲ့သူတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ သင်ဟာ နောက်ကောက်ကျကျန်နေနိုင်ပါတယ်။တစ်ချို့က ရာထူးအငယ် လျှောက်တာမို့ company အကြောင်းလေ့လာဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်တတ်ပါတယ်။ သင်က ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို သေချာပြန်ရှင်းပြနိုင်တဲ့သူမျိုးဆိုရင် အင်တာဗျူးအောင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းက များတာပေါ့။ အဲ့လို company အကြောင်းသိဖို့ Facebook/Linkedln နဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ Website တွေမှာ သေချာလေ့လာလို့ရပါတယ်။၂။ Interview ဖြေရမယ့်နေရာကို ကြိုတင်စုံစမ်းပါသင် interview ဖြေရမယ့် နေရာက သွားရလွယ်ကူတဲ့ နေရာတွေဆို အခက်အခဲမရှိပေမဲ့ သွားနေကျမဟုတ်တဲ့ နေရာမျိုးတွေ၊သွားရခက်ခဲတဲ့ နေရာမျိုးတွေဆိုရင် ...
Lamin Thiha Senior Recruitment Specialistအလုပ် တစ်ခု ကို စတင်လျှောက်တဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ CV က အခြားသူများထက် ထင်သာမြင်သာဖြစ်ဖို့နဲ့တိကျရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်. ကိုယ့် အကြောင်းကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာပြောပြဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတဲ့ first impression ကို သင့်ရဲ့ အလုပ်ရှင် ကမြင်တွေ့ရမယ့်အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ CV တစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ထည့်သွင်းးစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါတယ်။၁။ရှင်းလင်းတိကျသောဆုံးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပါ။CV တစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ သင်ဖော်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြပါ။ သင့်ရဲ့ လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ဆက်သွယ်ရမည့် email address စတဲ့ အရေးကြီးသည့် အချက်လက်တွေကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းရမယ်။ ထင်သာမြင်သာတဲ့ နေရာမှာ ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တာအပြင် သင်ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ရေးတဲ့အခါမှာ Keywords တွေပါအောင် ရေးရမယ်။၂။ အလွန်အကျွံ တန်ဆာဆင်မှုများကို ရှောင်ပါ။CV တစ်ခုမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကာလာအရောင်ကို နှစ်ရောင် (သို့မဟုတ်) သုံးရောင် ထက်ပိုပြီး အသုံးပြုတာ၊လုံးဝမလိုက်ဖက်တဲ့ အရောင်တွေကို တွဲဖက် အသုံးပြုတာတွေက အမြင်အာရုံကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်။အဲ့တာကြောင့် အဲ့လိုပြုလုပ်တာမျိုးတွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် font size, ...
Ngwar Bo Mee,Head of Customer Successကိုယ် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အလုပ်ကို ရှာဖွေရရှိဖို့ တစ်ချို့ လူတွေအတွက် ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ချို့အတွက် ကြတာ့ အဲ့အရာကစိတ်ပင်ပန်း အားအင်ကုန်ခမ်းစေတယ်။ အလုပ်ရှာရတာ စိတ်ပင်ပန်းတဲ့ သူအချို့အတွက် အောက် အချက်အလက် တွေဟာ အကျိုးရှိပြီးလက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းတွေပါ။သင်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကို ရရှိ ဖို့ သင်စိတ် ပျက်ခြောက်ခြားနေတာ မျိုးလုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။၁။ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ၊ကိုယ် ဘာလုပ်တတ်လဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ပါသင်လုပ်ရှာဖို့ စပြီးစဉ်းစားပြီးဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးသင်လုပ်ရမယ့်အရာက သင်ဘာဖြစ်ချင်လဲ ၊ သင်ဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတာ ကိုအရင်လေ့လာစမ်းစစ်ရမှာပါ။တကယ်လို့ သင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကို မသိဘူးဆိုရင် list တစ်ခုလုပ်ပါ။အဲ့ list မှာ သင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အချက်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်မလိမ်ညာပဲ ရေးပါ။အရမ်းကြီးကျယ် တဲ့အရာဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။သင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ကျွမ်းကျင်လား သို့မဟုတ် ကိန်းကဏန်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင် လား။ သင့်ရဲ့ အားသာချက် ကောင်းကွက်တွေကို သင်ပိုသိလေလေ အလုပ်ရွေးချယ်ရတာ ပိုလွယ်ကူ လာလေလေ ဖြစ်တယ်။ ဒီအဆင့်မှ သင်တစ်ခု သတိထားရမှာကတော့ သင်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားသူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်မိဖို့ပါပဲ။ ကိုယ့်အကြောင်းကို သေသေချာချာ သိအောင်လုပ်ပါ။၂။ စနစ်တကျ အလုပ်ရှာ ပါဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ သင်လုပ်ရမှာကတော့ သင်အလုပ်ရှာတာကို စနစ်တကျ စီစဉ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဉာဏ်ကို လွှာပြီး သုံးရပါမယ်။ အကယ်၍ သင်က ပထမ အဆင့်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ကို ရှာဖွေဖို့ မခဲယဉ်းတာ့ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ကိန်းကဏန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုရင် စာရင်းအင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင် ပါ။သင်ဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတယ်။သင်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ထိထိမိမိ ချပြနိုင်တယ်ဆိုရင် Marketing သို့မဟုတ် Communication နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကို ရှာဖွေ လုပ်ကိုင် ပါ။သင်က လူတွေနဲ့ တွေ့ရတာကို နှစ်သက်တယ် လူတွေကို အကြံပေးရတာကို ကြိုက် တယ်ဆိုရင် sales (အရောင်းပိုင်း) (သို့မဟုတ်) အကြံပေးတဲ့အပိုင်း အစရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို ရှာဖွေ လုပ်ကိုင်ပါ ။ ဆိုရိုးစကားတစ်ခုလိုပေါ့နော်။ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ အရာကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခွင့် ရှိပါတယ်။သင် ဘာကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိရင် -သင် အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ company တွေကို list လုပ် ပါ။အလုပ်ခန့်မယ်သူက ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာကို စုံစမ်းပါ။အဲ့လို စုံစမ်းတဲ့အခါမှာ သင် Network ကို အသုံးပြုပါ။...
Top5TED Talks for Personal & Professional Growth
Khai Deih NeamDigital Marketing Executiveပိတ်ရက်မှာ ကြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံး TED talk (၅) ခု?TED talk ဆိုတာက နယ်ပယ်ပေါင်းစုံက အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ Knowledge Sharing လုပ်တဲ့ video တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက်လည်း အချိန် ၁၈ မိနစ် အများဆုံး ပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တိုတို အတွင်း သင်ခန်းစာ အများကြီး ရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။TED talk ကြည့်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ပညာရေးမှာကော လုပ်ငန်းခွင်မှာကော စိတ်ခွန်အားတွေရစေနိုင်ပါတယ်။အခုပိတ်ရက်မှာလည်း အချိန်တွေကို TED talk ကြည့်ပြီး အကျိုးရှိရှိနဲ့ အသုံးချကြရအောင်။?1. ...
When to Ask foraPay Raise?
Ep.7of Career Marathon Series focuses on how and when an employee should ask fora...
How to Become an IT Leader
Ep.6of Career Marathon Series sheds light on how to buildasuccessful IT career based ...
Prioritizing based on Purpose
Khant Zaw HeinDigital Marketing InternPrioritizing based on Purposeနေ့စဉ်အလုပ်ဟာ အဓိပ္ပါယ်မပြည့်ဝဘူးလို့ ခံစားလာရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တော်တော်များများဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ပိုင်းအားဖြင့် ခိုင်မာတဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိလို့ပါ။ Prioritizing လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ရမယ့် Tasksတွေကိုချရေးပြီး အဲ့Taskတွေကို Rank လုပ်လိုက်တာပဲလို့ တွေးရင် လွယ်တယ်ထင်စရာရှိပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာ အလုပ်ပြီးဖို့၊ မြန်ဖို့ကျတော့ ပိုနက်နဲသွားပြန်တယ်။ ဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အလုပ်တွေကိုအခြေခံပြီး Prioritize လုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။1.ကိုယ့်ကိုအလုပ်မှာ ဘယ်အရာက အားဖြစ်စေလဲရှာပါ။ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ ကိုယ့်ရုံးမှာ ဘယ်အရာတွေကို လုပ်နေရတဲ့ အချိန်ကကိုယ့်ကိုကိုယ် အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်လို့ခံစားရလဲ ရှာဖွေပါ။ ဥပမာ-ကိုယ်က Customerတွေကို ကူညီရတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်အလုပ်ဖော်ကို သူနားမလည်တာတွေရှင်းပြရတဲ့အခါ၊ ကိုယ့်အထက်လူကြီးကို အကြံတွေတင်ပြရတဲ့အခါ၊ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ရှိသမျှအကူန်ချရေးပါ။2.ကိုယ့်ကိုအားဖြစ်စေတာတွေထဲက တန်ဖိုးရှိတာကိုပြန်စစ်ပါ။ဒီတစ်ဆင့်မှာတော့ အပေါ်ကရေးခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲမှာမှ ဘယ်အရာတော့ နေ့တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးလဲ။ ဘယ်အရာကတော့ ကိုယ့်ကြိုက်ရင်တောင် ခဏခဏ မလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုတာကို စစ်ထုတ်ပါ။ဘယ်အရာကို ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးလဲ။အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ့်အတွက်၊လုပ်ငန်းအတွက် ရည်ရှည်မှာ အကျိုးမပြုတဲ့ စိတ်အလိုလိုက်တာမျိုးတော့ ရှောင်ရပါမယ်။ ဘာမလုပ်ရဘူးလဲဆိုတာပြီးမှ ကျန်တဲ့ဟာတွေကို ကျွနိတော်တို့ နေ့စဉ်အလုပ်ကို Prioritize လုပ်တဲ့အချိန်မှာ သုံးမှာပါ။3.ကိုယ့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ အလုပ်တွေကို အရင်ဆုံးလုပ်ပါ။သီအိုရီကတော့ တစ်နေ့တာအလုပ်စရင် ကိုယ့်အတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး၊ အဓိပ္ပါယ်အရှိဆုံး အလုပ်နဲ့စပါ။ ကိုယ်တကယ်စိတ်ပါတာကို လုပ်ရတဲ့အတွက် အစကောင်းဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာလုံးဆက်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေမှာ အဆင်ပြေတာတွေ့ရမှာပါ။နောက်တစ်ခါ ကိုယ့်အတွက်အရမ်းပင်ပန်းမယ့် အလုပ်တွေကို မလုပ်ခင် ကိုယ့်ကိုအားဖြစ်စေတဲ့ ကိုယ့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ အလုပ်သေးသေးလေးတွေ ခံပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။ အလုပ်မှာ မဖြစ်မနေချက်ချင်း လုပ်ရမဲ့ ...
How to ChooseaJob, How to Succeed ...
Ep.5of Career Marathon Series touches on many subjects, giving general guidance on how to pick ...